उपराष्ट्रपतिको सिक्किम भ्रमण रद्द | The Republic Indian
Home राष्ट्रिय उपराष्ट्रपतिको सिक्किम भ्रमण रद्द
गान्तोक। भारतका उपराष्ट्रपति एस. वंकैया नाइडुको प्रस्तावित तीन दिवसीय सिक्किम अनि दार्जीलिङ्ग भ्रमण चौथापल्ट पनि मौसमको गडबडीका कारण अनिश्चितकालका लागि रद्द भएको छ। उपराष्ट्रपतिले २२ अक्टोबरका दिन दक्षिण जिल्लाको नाम्चीमा नव-निर्मित भाइचुङ स्टेडियमको विधिवतरूपमा उदघाटन गर्ने योजना रहेको थियो।
भारतका उपराष्ट्रपति एस. वंकैया नाइडुका सूचना अधिकारीले पछिबाट राज्य सरकारलाई एक ई-मेल मार्फत सो जानकारी गराएको थिए भने उनको अघिल्लो चरणको भ्रमणको मिति भने कुनै तय गरिएको छैन।
राज्य सरकारको उच्च स्तरीय सुत्रले बताएअनुसार उपराष्ट्रपति एस. वंकैया नाइडु ३१ अक्टोबरका दिन सिक्किम आउन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेको छ।
उपराष्ट्रपति नाइडुले सिक्किम भ्रमणको क्रममा नाम्चीमा नव-निर्मित भाइचुङ स्टेडियम उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो भने यस बाहेक, सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयको शिलान्यास तथा जोरथाङमा प्रस्तवित बहुउद्देश्य अडिटोरियमको शिलान्यास पनि राख्ने योजना सरकारले तयार गरेको थियो।
उल्लेखनीय छ, उल्लेखनीय छ, नाम्चीको पहिलो तथा राज्यको दोस्रो स्टेडियमका रूपमा निर्माण भएको भइचुङ स्टेडियमको कूल दर्शक क्षमता लगभग १०,००० रहेको छ। यस स्टेडियमको नर्दन तथा ईस्टर्न ग्यालेरीमा कुल ४,००० चौकी लगाइएको छ। इस्टर्न ग्यालेरीको मध्य भागमा रहेको भीआईपी ग्यालेरीमा ३४० सीट रहेका छन् भने एउटा छुट्टै भीआपी लाउन्ज पनि रहेको छ। स्टेडीयमको माथिल्लो भागमा ग्रास (ग्रीन) ग्यालेरी रहेको छ। भाइचुङ स्टेडियमको खेल क्षेत्र १०५ मिटर लम्बाइ र ६८ मिटर चौडाईको रहेको छ। यसरी नै स्टेडीयम भित्र रहेको कुल मैदान क्षेत्र ११५ मिटर लम्बाइ र ७८ मिटर चौडाईको रहेको छ।
मैदानमा टाइगर ट्रफ लगाइएको छ जसलाई फिफाले मान्यता दिइसकेको छ। यो ट्रफ इटियस कम्पनीले मैदानमा लगाएको हो। यसको शुरुआती लागत ३२ करोड़ रुपियाँ निर्धारित गरिएको थियो भने निर्माण कार्य पूरा हुँदा ६० करोड़ लागत आएको विभागीय पक्षले जानकारी दिएको छ।
भाईचुङ स्टेडियमा फुटबल खेल छेत्र र दर्शक ग्यालेरी बाहेक जीम, होस्टेल, फुड कोर्ट लगायत स्टेडीयममा चाहिने अन्य सबै सुविधा रहेको छ। यसमा लगभग ६० वटा कार पार्किङको पनि सुविधा रहेको छ। स्टेडीयमा प्रवेश गर्नका लागि चारवटा द्वार रहेका छन्।
Previous articleमन्त्री सामडुप लेप्चाद्वारा पैहोग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण
Next articleउपराष्ट्रपतिको सिक्किम भ्रमण रद्दभाइचुङ स्टेडियमको उद्घाटनको मिति सऱ्यो